News - Quruxda hal abuurka, Isbedelka cusub ee "wax soo saarka" ee Shiinaha
Quruxda hal-abuurka, Isbeddellada cusub ee “wax-soo-saarka” Shiinaha
Galabnimadii Diseembar 17-keedii, Munaasabadda abaalmarinta sanadlaha ah ee "Qurux-soo-saarka" ee 2019 iyo shir-weyne, oo ay iska kaashadeen Shiinaha Made Network iyo Golaha Shiinaha ee Dhiirrigelinta Ganacsiga Caalamiga ah (CCPIT), ayaa lagu qabtay Nanjing Greenland Zipong Intercontinental Hotel. SGS, BV, TUV Nande, wakiilo shirkadaha guuleysta iyo warbaahinta guud ayaa isugu yimid Jinling si ay goob joog ugu noqdaan munaasabaddan sharafta leh ee laga sameeyay Shiinaha. Qaar ka mid ah alaabada guuleysatay ayaa lagu soo bandhigay xafladda abaalmarinta.
Xilligan la muujinayo, 49 shirkadood oo leh 57 wax soo saar ayaa iftiiminaya jinni.
Xulashada "Qurxinta Waxsoosaarka" ee Shiinaha ayaa baaraysa gudaha-Shiinaha iyada oo leh indho adag, iyada oo raadineysa alaabada ugu qiimaha badan; Laga soo bilaabo maalinta badeecadaha bishii Janaayo ilaa qiimeynta horudhaca ah ee Oktoobar, wadar ahaan 5,917 alaab ayaa la helay. Kadib qiimaynta horudhaca ah, wadar dhan 458 alaabood ayaa galay heerkii ugu dambeeyay qiimaynta, ka dibna qiimaynta waxaa laga fuliyay dhinacyada tayada waxsoosaarka, qiimaha hal-abuurka, is-dhexgalka kombuyuutarka aadanaha, badbaadada iyo ilaalinta deegaanka, saamaynta bilicsan iyo cabbirada kale. Ugu dambeyntiina, 57 alaabada aadka u fiican iyo 49 shirkadood ayaa ku guuleystay kaalinta koowaad.
Kooxda Fujian Fenan Aluminum ayaa taagnaa oo ku guuleysatay abaalmarinta.
“Kan cusub wuu nool yahay, duuguna waa qulqulaya; kan cusub ayaa dhaafi doona, kii hore wuu istaajinayaa.” Shaqsiyaad ilaa dalal, sideen ku gaari karnaa halka aan higsaneyno? Sidee ayaan u burburin karnaa horumarka ugu hooseeya uguna ugaarsannaa "saqafka" Jawaabta waxay tahay "furid" baahida suuqa iyo inaan sameeyno habab cusub.
FOEN Fen 'wuxuu diiradda saarayaa isku darka tamarta cusub dhismayaasha dhaqanka, keenista tikniyolo cusub, moodooyin cusub, fikrado cusub iyo adeegyo cusub suuqa, garashada tartanka kala duwanaanta, hagaajinta saamaynta astaanta, si joogto ah ugu faafinta codka sumadda Shiinaha adduunka, iyo samaynta adduunka jacaylku wuxuu ku dhacay Made-in-China.